Ahoana ny fampiasana ny fakantsary iPhone amin'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Azo antoka fa maro aminareo no efa mahalala ny fiasa izay ananantsika ao amin'ny Apple Watch ary mamela antsika hampiasa ny fakantsary iPhone amin'ny lavitra. Ity safidy ity dia natao ho an'ny maka sary tsy mikasika ny iPhone, izany hoe mamela ny telefaona apetraka amin'ny toerana rehetra, tripod na fanohanana.
Ny zavatra tsara indrindra momba an'io fiasa io dia ny hoe tena mandeha tsara izy io ary tsy ilaina raha misy olona maka sary antsika rehefa te hivoaka amin'ny toerana manokana isika na manana fidirana lavitra amin'ny iPhone mihitsy, endri-javatra watchOS taloha ity Saingy tena mety ho mora ampiasaina amin'ny toe-javatra maro ary bebe kokoa ankehitriny amin'ny fahavaratra dia matetika isika no maka sary bebe kokoa miaraka amin'ny namana, fianakaviana ary ny hafa ao anaty vondrona.
Ho fanampin'izany, Apple dia namoaka horonantsary andro vitsy lasa izay izay anehoany ny asany ary izay misy amin'ny fantsom-panohanana Apple. Ity ny fomba fiasan'izy ireo ary fampahavitrihana ny fakantsary iPhone avy amin'ny famantaranandro endrika lavitra:
Ary koa rehefa hitanao amin'ny horonantsary azon'ny mpampiasa misafidy asa isan-karazany misy amin'ny alàlan'ny fanindriana ireo teboka telo. Ireo safidy ireo dia ahafahantsika mifamadika eo anelanelan'ny fakantsary anoloana mankany aoriana, manampy ny Flash mandeha ho azy, mihetsika na tapaka tanteraka, mifamadika eo anelanelan'ny endrika mivantana ny sary mivantana, nohafanaina na tapaka, ary ny kalitao HDR nohafanaina na tapaka.
Ny tsara indrindra dia ity fampidirana azy ity ho azy hoazy avy hatrany ny fametram-potoana telo segondra ary maka sary 10 koa ianao mba hahafahanao misafidy ilay tianao indrindra na izay no tsara indrindra. Avy eo dia azonao atao koa ny mahita ny sary mivantana avy amin'ny Apple Watch ary avereno sao tsy mivoaka araka ny itiavany azy ilay sary. Tsy misy mikasika ny iPhone-n'ilay tranonkala izay ametrahana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fampiasana ny fakantsary iPhone amin'ny Apple Watch
Ny fampiharana Fox Now dia tsy misy intsony amin'ny Apple TV an'ny taranaka fahatelo
Saika fihenam-bidy 240 euro amin'ny MacBook Pro 16 "